मृ’त्यु हुनु अघि मानिसमा देखिने ९ लक्षण यस्ता छन्, जानी राखौं – Rapti Khabar
सृष्टिको नियम नै छ कि जो पृथ्वीमा जन्म लिएपछि मृ’त्यु अवश्यंभावी छ । शरीर छोडेर एक दिन न एक दिन परलोक जानै पर्छ । धर्म ग्रन्थहरुमा हाम्रो शरीरको मात्र मृ’त्यु हुने तर आ’त्म भने अमर हुने उल्लेख छ ।
पुराणमा मानिसको मृ’त्यु हुनु अघि देखिने ९ लक्षणबारे चर्चा गरिएको छ ।
गुराण पुराणका अनुसारः
१- जन कुनै ब्यक्तिको पानीमा वा तेलमा छायाँ देखिन छोड्छ वा मधुरो देखिन थाल्यो भने यो मृ’त्यु निकट भएको संकेत हो । छायाँ हराउन थालेपछि मृ’त्यु निकट भएको बुझ्नु पर्छ ।
२- मृ’त्यु निकट भएपछि मानिसको आँखामा ज्योति कम हुँदै जान्छ । नजिक बसेका ब्यक्ति पनि देखिन छोडे वा चिनिन छोडे भने पनि मृ’त्यु निकट आएको बुझिन्छ ।
३- जीवनमा गरिएका राम्रा र नराम्रा कर्म अनुसार मृ’त्यु नजिक भएपछि मानिसको आँखामा त्यस्ता कुरा घुम्ने गर्छन् । फिल्ममा पुराना कुरा देखाइएको जस्तै जीवनका राम्रा र नराम्रा कर्म आँखा अगाडी आउँछन् ।
४- जसको कर्म निक्कै राम्रो छ उसको आँखामा मृ’त्यु हुनु अघि प्रकाश देखिन्छ । यस्ता ब्यक्ति मृ’त्युको समयमा निश्चित देखिन्छन् ।
५- गरुण पुराणका अनुसार मृ’त्युको घडी नजिकिएपछि यमराजका दुत मृ’त्यु हुने ब्यक्तिको नजिक देखिन्छन् । मृ’त्यु हुन लागेका ब्यक्तिले मात्र यस्ता भ’यंकर जीवको दृष्य देख्छ ।
६- पाप कर्म धेरै गरेका ब्यक्तिका सामने यमदुतहरु ड’रलाग्दा देखिन्छन् । यस्ता ब्यक्ति मृ’त्यु हुने समयमा डराएको देखिन्छ ।
७- शरीर त्याग गर्ने समयमा मानिसको आवाज हराउँछ । बोल्न खोजे पनि बोली आउँदैन । कसैले घाँ’टी च्याँ’पे जस्तो आवाज आउँछ ।
८- गरुण पुराणका अनुसार आ’त्मा जीवनका सबै घटनाको अर्थात कर्मको आफ्नो साथमा लिएर शरीर त्या’ग गरिदिन्छ । अभौतिक शरीरलाई आफूले गरेका खराव कर्मको प्रयाश्चित गर्न यमराजको ढोकामा उपस्थित गराइन्छ ।
९- उक्त पुराणका अनुसार मृ’त्युपछि पा’पी मनुष्यलाई २४ घण्टामा यमदूतले वायुमार्गबाट यमलोकमा पुर्‍याउँछन् । यमराजले कर्म अनुसार नर्कमा सजाय सुनाउँछन् ।
यी ११ सपना जसले मृ’त्युको संकेत गर्छ
सपना, सुतेको बेलाको जादुगरी संसार जहाँ हामी अनौठो घटना अनि कथामा भुल्छौं। धेरै मानिसहरुको भनाइमा, कोही नजिकका, आफन्त तथा प्रियजनहरुको मृ’त्युको अगाडी अ’नौठो सपना देखिन्छ। धेरै मानिस जम्मा भएको, कोही नचली ढल्केर बसेको सपना देखेको केही दिन पश्चात प्रियजनको मृ’त्युको खबर आइपुग्छ। मृ’त्युको सपना, म’रण अनि वियोग सबैभन्दा दु’खद छण हुन्।
कालो रंगको अर्थ हुन्छ, थाह नभ’एको, अचे’तन, ख’तरा, र’हस्य, अ’न्धकार, मृ’त्यु, शो’क, ति’रस्कार, घृ’णा वा द्वे’ष। यो रंगले तपाइला‍इ तपाइको अचेतनमा हेर्नको लागि उक्साइरहेको हुन्छ, तपाइलाइ आफ्नो बारेमा बुझ्न डाकिरहेको छ कालो रंग’ले। प्रेमको कमीलाइ पनि जनाउँछ, अनि सहयोग गर्नेहरुको कमी भएको जानकारी दिन्छ। साथै यसले सफा अनि खालीकुरा लाइ पनि जनाउँछ। तपाइमा केही सम्भावना लुकेर बसेको छ साथै केही अवसरहरु आउन बाकीँ नै छ भन्ने पनि जनाउँछ।
सपनामा कुनै बच्चालाइ स्याहार गर्दै हुनुहुन्छ अनि बच्चा रुन पुग्यो भने कि सपना देख्नेको मृत्यु हुन्छ कि त कोही अत्यन्त नजिकको मानिसको मृ’त्यु हुन्छ।
सपनामा खुसी हुदै नाच्ने गाउने देखिन्छ भने सपना देख्ने मानिसको हत्या हुन्छ भनि विश्वास गरिन्छ। कोहि मानिसले सपनामा शरिरमा तेल लगाइ गधा चढेर हिडेको देख्छ भने उस्को तत्काल मृत्यु हुन्छ।
यी खानेकुरा भुलेर पनि सँगै सेव’न नगरौं, खत’रा हुनसक्छ
कतिपय खानेकुरा यस्ता छन् जुन सँगै मिसायर खादा यसले हानि गर्न सक्छ | हामीलाई जानकारी नहुदा हामी कुन खानेकुरामा के मिसाउने नै थाहा हुदैन |
तपाइको लागी केहि तिप्शारू तल दिएको छ | एकपटक पढ्नुहोस्:-
१. प्याज र दुधः
२. माछा र दहीः
दही र माछाको मिश्रण पनि शरीरका लागि घातक मानिन्छ । माछाले पेटमा निक्कै गर्मी गर्ने हुँदा चिसो मानिएको दहीसँग खानु हुँदैन । यसले छालाको रोग लाग्ने र एलर्जी हुने खतरा समेत बढाउँछ ।
३. खाना र फलः
खाना खाने समयमा फलफूल सेवन नगर्नुस् । फल सेवन गरेपछि कम्तिमा २ घण्टा पछि मात्र खाना खानु राम्रो हुन्छ ।
खानामा कार्वोहाइड्रेट बढी हुने र फलमा प्रोटीनको मात्र बढी हुने हुँदा यसले पेटमा सँगै खाँदा एसिडिटी बढाउन सक्छ । यसले अपच हुने वा अन्य रोगका खतरा जन्माउँछ ।
४. दुध र कागतीः
५. मासको दाल र दहीः
मासको दाल खाएको समयमा दही खानु नराम्रो मानिन्छ । यसले स्वास्थ्यमा नराम्रो असर गर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । यसबाट मुटुसम्बन्धी बिरामी हुन सक्छ ।
६. दही र परौठाः
७. मासु र मिठाइः
मिठाइसँग मासु खानु नराम्रो मानिन्छ । तर, कुखुराको मासु खाएको बेला दुधबाट बनेका खानेकुराहरु खानु हुँदैन । यसले पेटमा समस्या ल्याउन सक्छ ।
८. दुध र दहीः
९. आलु र भातः
हुन त हाम्रो हरेक तरकारीमा आलु हुन्छ र भातसँग खाने तरकारीमा पनि आलु हुन्छ । तर आलु र भातको मिश्रण पेटका लागि भने समस्या हुने विज्ञहरु बताउँछन् ।
यी दुवै कुरा एकै पटक सेवन गर्दा पेटमा कब्जियतको समस्या हुने बताइन्छ ।
१०. कोल्डड्रिङ्क्सपछि गुटका वा पान मसलाः
यदि तपाइँले कोक फान्टा वा अन्य कोल्ड ड्रिङ्क्स सेवन गर्नु भएको छ भने पान मसला वा गुट्का सेवन नगर्नुस् । पेपरमिन्ट भएको पान मसलासँग कोल्ड ड्रिङ्क्स सेवन गर्नु घातक मानिन्छ ।
यी दुईको मिश्रण विषाक्त हुने विज्ञहरु बताउँछन् ।
यी ४ बिरामीले भुलेर पनि केरा खानु हुदैन
केरा १२ महिना फल्ने फल हो। यो खानुको धेरै फाइदाहरु छन्। तर केही अवस्थामा केरा खानु हानिकारक मानिन्छ।
विद्यार्थीको लागि दिनको एउटा केरा खानु आवश्यक छ। यसले दिमागको तागत बढाउँछ र स्मरणशक्ति तेजिलो बनाउँछ।
शारीरिक व्यायाम गर्ने व्यक्तीले केरा खानु अत्यन्त जरुरी छ। यसमा भएको पोटाशियमबाट तागत तुरुन्त मिल्छ।
कस्ता समस्या भएको बिरामीले खान हुदैन ? जानीराखौ..
२ .मांशपेशी कम्जोर हुन्छ
यसमा थायरेमिन हुन्छ। केरा खानाले टाउको दुख्ने र माइग्रेनको असर बढ्छ।
हरियो खुर्सानी प्रत्येकको भान्सामा हुने गर्दछ । धेरै मान्छेहरू यसलाई काँचै खान पनि रुचाउँछन् । हरियो खुर्सानीमा भिटामिन बी ६, भिटामिन ए, आइरन, कपर र पोटासियम हुन्छ । हरियो खुर्सानीले खानामा स्वाद ल्याउँदैन मात्र, यसका अनेकौं फाइदाहरू पनि छन् । हरियो खुर्सानीमा कतिपय औषधीय गुण पनि हुन्छ । मुटुरोग, पेट दुख्ने समस्या जस्ता समस्याबाट यसले […]
Posted on October 7, 2020 October 7, 2020 Author Rapti Khabar
डा. रवीन्द्र पाण्डे नेपालमा भएको कोरोना संक्रमणले झण्डै डेढ अर्ब जनसंख्या भएको चीनलाई उछिनेको छ । यो प्राप्तिलाई सरकार तथा आमनागरिक काँधमा काँध मिलाएर हिँड्नुको प्रतिफल मान्नुपर्दछ । चीनमा जस्तै दैनिक दशौं लाखको परीक्षण गर्ने हो भने नेपालले धेरै देशलाई जितिसकेको प्रमाणित हुनेछ । गुणस्तरहीन किट ल्याएर, परीक्षणको दायरा साँघुरो बनाएर, सीमा नाका खुकुलो गरेर, […]